More 777 Packs 3 taona 2 volana lasa izay #631
Tiako ny sakan'ny 777 mega napetrakao fsx, id tia mahita fonosana vaovao ho an'ny 777 satria ianao irery no nanao 777-200LR. Tsara ny fonosana -200ER sy -300ER. Ive dia nahita fonosana ho an'ireo any an-kafa saingy ny VC dia napetraka mafy tokoa amin'ny resaka famatorana lakile.
Manantena ianao fa hijery izany.
More 777 Packs 3 taona 2 volana lasa izay #636
Tsy sarotra ny hanova ny VC ... na farafaharatsiny, noho izany dia mandre ny lol aho manana 737 miaraka amin'ny cockpit tsara sy mahafinaritra VC (na dia tsy mampiasa izany lol) aza aho ary raha tsy maintsy, izaho 'd haka ny VC amin'ny vorona hafa amin'ny motera 2 miaraka amin'io.
More 777 Packs 3 taona 2 volana lasa izay #637
Tsy ny VC mila mivezivezy izany fa fantatro kosa fa tsy sarotra izany, ary tsy natao ho an'ny karazana freeware rehetra. ny fomba nanapahan'ny olon-kafa ny sehatra hanokatra.
Ohatra, ny 777 Rikoooo dia mampiasa ny sombim-pifandraisana + rehetra rehetra mba hanokafana ireo takelaka ilaina toy ny overhead, fmc sns. Hafa, mandamina azy ireo hanokatra ny posky ampiasaina, manao ny nd / pfd lehibe kokoa, sns etc. sns ary tsy manome Ny fidirana amin'ny tontonana ambony dia ny hamadika zavatra amin'ny antony izay voafetra ihany ny VC amin'ny azonao atao. Fa, ny fantsakana mora ny ordinatera ho an'ny rikoooo dia mahatonga izany ho tsara.
Plus, mieritreritra aho fa hanao zavatra tsara kokoa i rikoooo amin'ny famenoana azy ireo ary manampy betsaka kokoa amin'ny fanangonana izany
More 777 Packs 3 taona 2 volana lasa izay #638
Heveriko fa afaka manova izany ao amin'ny panel.cfg
More 777 Packs 3 taona 2 volana lasa izay #639
Fantatro fa voatery nanitsy ny panel.cfg aho mba hanampy ireo zavatra, toy ny GPS. Tsy hitako izay antony tsy ahafahanao mandamina indray ny baiko sy izay tsy ...
More 777 Packs 3 taona 2 volana lasa izay #641
Aho efa nanao izany rehetra izany, i vao tonga soso-kevitra ny fanaovana Packs 777 bebe kokoa, na ny entana izay manana ny 200 sy 300 ao aminy fa tsy irery ihany ny 200LR. Toy izany koa ny entana A330 dia afaka A332 sy A333 ahitana ny
More 777 Packs 3 taona 2 volana lasa izay #642
Nangona ihany koa ny pack n-2 tamin'ny loko vaovao loko vaovao sy loko Kanada, KLM loko vaovao, United Airlines, JAL, ANA, Delta, Air Austral, LH CARGO, B777-300ER klm - Air Canada Emirates - Egyptair - TAM-swiss -BA - Air transat air. Misaotra anao
Fotoana mamorona pejy: 0.218 segondra